နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ အသီးသီးတို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီတစ်အုပ်တစ်မသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ တတိယအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်၊ တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ် များဖြင့်လည်း သစ်ပင်မျိုးစေ့များ ဝေဟင်မှကြဲချစိုက်ပျိုးပေးခဲ့ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဩဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၉ မေ ၂၈၊ ၂၀၂၀
နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ အသီးသီးတို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီတစ်အုပ်တစ်မသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ တတိယအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်၊ တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ် များဖြင့်လည်း သစ်ပင်မျိုးစေ့များ ဝေဟင်မှကြဲချစိုက်ပျိုးပေးခဲ့
ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၈
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ အရိပ္ အာ၀ါသရရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးတို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီတစ္အုပ္တစ္မ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ေဇယ်ာသီရိၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရဆင္း ဆည္အနီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။
အဆုိပါ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ဇနီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)ရွိ ႐ုံး၊ ဌာနအသီးသီးမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္၍ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။
ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ရတနာတန္း၀င္ ပ်ဥ္းကတိုးပင္ကုိ ဦးေဆာင္ စုိက္ပ်ိဳးေပးၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားက သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီးတြင္ ရတနာတန္း၀င္ ကြၽန္း၊ ပိေတာက္၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ မေဟာ္ဂနီပင္မ်ားႏွင့္ မန္ဂ်န္ရွားပင္မ်ားအား တစ္အုပ္တစ္မ စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးေနမႈအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ား၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တတိယအႀကိမ္ မုိးရာသီ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ရတနာတန္း၀င္ ကြၽန္း ၁၇၁၀ ပင္၊ ပိေတာက္ ၁၂၀၀ ပင္၊ ပ်ဥ္းကတုိး ၂၈၀ ပင္၊ မေဟာ္ဂနီ ၅၀ ပင္ႏွင့္ မန္ဂ်န္ရွား ၁၃၂၀ ပင္ စုစုေပါင္း ၄၅၆၀ ပင္အား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ေရဆင္းဆည္ပတ္၀န္းက်င္၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ မုိးရာသီသစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးပြဲအထိ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားတြင္ ရတနာတန္း၀င္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္ သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရေလကာပင္ စုစုေပါင္း ၁၅၀၈၄၃ ပင္အားစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ထုိ႔အတူ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးတြင္လည္း မုိးရာသီ တစ္အုပ္တစ္မ သစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားကို တတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္၍ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးၾက သည္။ ထုိသုိ႔စုိက္ပ်ိဳးရာ၌ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၄၉၈၃၂ ပင္၊ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၉၅၅၅ ပင္၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၅၃၈၄၆ ပင္၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၀၁၀၀ ပင္၊ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၂၇၀၄ ပင္၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၃၃၄၃ ပင္၊ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၀၈၇၇ ပင္၊ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၈၂၇၃ ပင္၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၇၅၅၀ ပင္၊ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၀၆၄၂ ပင္၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၄၃၉၁ ပင္၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္၂၄၃၉၀ ပင္၊ အလယ္ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၄၁၀၀၀ ပင္ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၄၉၃၄၆ ပင္အား စိုက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ယေန႕တြင္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ရတနာတန္း၀င္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရေလကာပင္ စုစုေပါင္း ၄၂၀၄၀၉ ပင္အား စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သည္။
ထုိ႕ျပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ၿပီး လုပ္အားစုိက္ထုတ္မႈ သက္သာ၍ အပင္မ်ားအခ်ိန္တုိအတြင္း ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေစရန္အတြက္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ သစ္ပင္မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေ၀ဟင္မွတစ္ဆင့္ ႀကဲခ်စုိက္ပ်ဳိး နည္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အပူပုိင္းေဒသ စိမ္းလန္းစုိေျပေရးဦးစီးဌာနတုိ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႕ အတြင္းရွိ ေျမဧက ၁၆၆၁၄ ဒသမ ၇၃ ဧက၌ သွ်ား၊ ဒဟတ္၊ မန္က်ည္း၊ တမာႏွင့္ မယ္ဇလီ မ်ဳိးေစ့ေပါင္း ၁၅၅ ဒသမ ၉၂ တင္းကုိ တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၉ ႀကိမ္ ပ်ံသန္း၍ ေ၀ဟင္မွ ႀကဲခ်စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုိ႕ တြင္လည္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ မန္က်ည္း၊ ေဘာစကုိင္းႏွင့္ မယ္ဇလီ မ်ဳိးေစ့မ်ား ႀကဲခ်စုိက္ပ်ဳိးေပးခဲ့သည္။
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၈
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် ရာသီဥတုအား အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ အရိပ် အာဝါသရရှိစေရန်၊ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတို့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ်မိုးရာသီတစ်အုပ်တစ်မ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ယနေ့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအား နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေဆင်း ဆည်အနီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်စိုက်ပျိုးပြီး ကြည့်ရှုအားပေးသည်။
အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊ လေ)နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ နှင့်ဇနီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီး၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းသားအရာရှိကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ရှိ ရုံး၊ ဌာနအသီးသီးမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် မိသားစုဝင်များ ပါဝင်တက်ရောက်၍ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ရတနာတန်းဝင် ပျဉ်းကတိုးပင်ကို ဦးဆောင် စိုက်ပျိုးပေးကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့်ဇနီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများက သတ်မှတ်နေရာအသီးသီးတွင် ရတနာတန်းဝင် ကျွန်း၊ ပိတောက်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ မဟော်ဂနီပင်များနှင့် မန်ဂျန်ရှားပင်များအား တစ်အုပ်တစ်မ စုပေါင်းစိုက်ပျိုးကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏ စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေမှုအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တတိယအကြိမ် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ရတနာတန်းဝင် ကျွန်း ၁၇၁၀ ပင်၊ ပိတောက် ၁၂၀၀ ပင်၊ ပျဉ်းကတိုး ၂၈၀ ပင်၊ မဟော်ဂနီ ၅၀ ပင်နှင့် မန်ဂျန်ရှား ၁၃၂၀ ပင် စုစုပေါင်း ၄၅၆၀ ပင်အား စုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ ရေဆင်းဆည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)အနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တတိယအကြိမ် မိုးရာသီသစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲအထိ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများတွင် ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ နှစ်ရှည် သီးနှံပင်နှင့် အရိပ်ရလေကာပင် စုစုပေါင်း ၁၅၀၈၄၃ ပင်အားစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထို့အတူ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတွင်လည်း မိုးရာသီ တစ်အုပ်တစ်မ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲများကို တတိယအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်၍ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ စုပေါင်းစိုက်ပျိုးကြ သည်။ ထိုသို့စိုက်ပျိုးရာ၌ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၄၉၈၃၂ ပင်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၉၅၅၅ ပင်၊ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၅၃၈၄၆ ပင်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၀၁၀၀ ပင်၊ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၂၇၀၄ ပင်၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၃၃၄၃ ပင်၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၀၈၇၇ ပင်၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၈၂၇၃ ပင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၇၅၅၀ ပင်၊ အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၀၆၄၂ ပင်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၄၃၉၁ ပင်၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင်၂၄၃၉၀ ပင်၊ အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၄၁၀၀၀ ပင်နှင့် တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် ၄၉၃၄၆ ပင်အား စိုက်ပျိုးကြပြီး ယနေ့တွင် တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင်နှင့် အရိပ်ရလေကာပင် စုစုပေါင်း ၄၂၀၄၀၉ ပင်အား စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် သစ်တောပြုန်းတီးမှုများအား ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် လွယ်ကူလျင်မြန်ပြီး လုပ်အားစိုက်ထုတ်မှု သက်သာ၍ အပင်များအချိန်တိုအတွင်း ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းနိုင်စေရန်အတွက် အပူပိုင်းဒေသများတွင် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော သစ်ပင်မျိုးစေ့များကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ဝေဟင်မှတစ်ဆင့် ကြဲချစိုက်ပျိုး နည်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များနှင့် အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး သြဂုတ် ၁၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ အတွင်းရှိ မြေဧက ၁၆၆၁၄ ဒသမ ၇၃ ဧက၌ သျှား၊ ဒဟတ်၊ မန်ကျည်း၊ တမာနှင့် မယ်ဇလီ မျိုးစေ့ပေါင်း ၁၅၅ ဒသမ ၉၂ တင်းကို တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ၉ ကြိမ် ပျံသန်း၍ ဝေဟင်မှ ကြဲချစိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တို့ တွင်လည်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်နှင့် မိုင်းမောမြို့နယ်အတွင်း တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် မန်ကျည်း၊ ဘောစကိုင်းနှင့် မယ်ဇလီ မျိုးစေ့များ ကြဲချစိုက်ပျိုးပေးခဲ့သည်။
တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် ငါးမျိုးစိုက်ထည့်ခြင်းများဆောင်ရွက်၊၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ငါးကောင်ရေ ၇ ဒသမ ၈ သန်းကျော်၊ ယခုဒုတိယအကြိမ် ငါးကောင်ရေ ၇ ဒသမ ၃ သန်းကျော်၊ စုစုပေါင်းငါးကောင်ရေ ၁၅ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ငါးမျိုးများစိုက်ထည့် ပေးနိုင်ခဲ့
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၉) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ် ပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်(ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမှပြန်လည်ရောက်ရှိ
ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း ပုစွန်မွေးမြူရေးဇုန်သီလဝါ(ရှုခင်းသာ) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် သင်္ဘောဖျက်စက်ရုံ(သီလဝါ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး(ရုပ်သံသတင်း)
မတ် ၁၅၊ ၂၀၂၀ Admin 0
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၂ Admin 0
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ – ၁၅ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့ ကျက်သရေဆောင် မဟာမြတ်မုနိဘုရား ကြီး နှစ်(၁၀၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ရတနာစိန်ဖူးတော်၊ ရွှေထီးတော် တင်လှူပူဇော်ပွဲ နှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေက အနေကဇာတင်မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို သာသနာတော်နှစ် ၂၅၆၅ ခုနှစ်၊ ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်နေ့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၂ Admin 0
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၂ Admin 0
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၂ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး H.E. Smt. Sushma Swaraj အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရေးမြို့နယ်အတွင်း မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုများကြောင့် ရေးမြို့ အားကစားရုံတွင် လာရောက်နေထိုင်လျှက်ရှိသာ ရေဘေးသင့်ပြည်သူအား ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်
ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုး ခေါင်းဆောင်သည့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) မှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ
ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှ ရေဘေးရှောင်ပြည်သူများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြား
ဩဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၏(၁၇)ကြိမ်မြောက် တပ်ဖွဲ့တွင်း အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီး၊ အငြိမ့်၊ ပြဇာတ်နှင့် မျက်လှည့်ပြိုင်ပွဲ ဆဋ္ဌမနေ့ယှဉ်ပြိုင်နေမှုများအား တက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေး
စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
ဖေဖော်ဝါရီ 2022 (၅)